Tag: kunyora misoro | Martech Zone
Tag: kunyora misoro
Maitiro Ekunyora Ekutarisisa-Kubata Misoro iyo Vanhu Vachadzvanya Kupfuura Neiyo
Mugovera, December 31, 2016 Mugovera, December 31, 2016 Douglas Karr
Misoro yemusoro kazhinji ndicho chinhu chekupedzisira chinonyorwa nemugadziri wemukati, uye dzimwe nguva havawani kurapwa kwekukodzera. Nekudaro, zvikanganiso zvinoitwa kana uchigadzira zvinyorwa zvinowanzo kuuraya. Kunyangwe mushandirapamwe wekushambadzira wakanakisa uchaparadzwa nemusoro wenyaya wakashata. Iwo akanakisa masocial media mazano, SEO matekiniki, zvemukati zvekushambadzira mapuratifomu, uye kubhadhara-per-kubaya kushambadzira kunogona kuvimbisa chinhu chimwe chete: Vachaisa musoro wako pamberi pevanogona kuverengera. Mushure meizvozvo, vanhu vachadzvanya kana kwete
Maitiro Ekunyora Chinyorwa Chinoita Kuti Vashanyi Vabate
Mugovera, Chivabvu 7, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Zvinyorwa zvinogara zvine bhenefiti yekuputira misoro yavo nemazita ane mifananidzo ine simba kana tsananguro. Munzvimbo yedhijitari, izvo zvoumbozha kazhinji hazvipo. Zvese zvemukati zviratidzika zvakafanana muTwitter kana Tsvaga Injini Mhedzisiro. Isu tinofanirwa kubata zvakabatikana zvevaverengi zviri nani kupfuura vatinokwikwidza kuitira kuti ivo vapfuure-uye vawane zvirimo zvavari kutsvaga. Pakati nepakati, zvakapetwa kashanu sevanhu vazhinji vanoverenga musoro wenyaya sekuverenga iyo kopi yemuviri. Rini